केपी ओलीको प्रश्न: चितवनमा महाधिवेशन गर्दा किन छटपटी ? : RajdhaniDaily.com sharethis
चितवन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनमा आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्दा विपक्षीलाई किन छटपटी भएको ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । नेकपा एमाले भरतपुर महानगर कमिटीको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्न चितवन आएका ओलीले प्रचण्डलाई लक्षित गरी उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कानूनी कठघारामा उभ्याउन माग